Nezvedu - Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd.
Mari yezvikamu Shanghai West Bridge Inc.
Kutsvaga mhando yakakwana uye kugadzira yepasi rose mhando
Dzokorora zvikamu zvemota imwe uye shandira bhandi rimwe, mugwagwa mumwe
Rori girazi indasitiri ketani kusangana
Kuvaka yepasi rose maindasitiri base
Vanhu vakatungamira, vanoshamisika, vanobatsirana uye vanokunda kuhwina
Isa kupera kupedza uye shingairira kugona
Enterprise Tarenda Maonero:
Iva nezvose kugona uye kutendeka kwezvematongerwo enyika
Yedu Kambani Mbiri
Shanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. yakavambwa muna 2011. Anenge makore gumi echiitiko murori girazi kugadzira. Kubva kuvandudzwa, kugadzirwa kusvika pakutengesa, kupa vatengi basa rekumira-rimwe, rine timu yakanakisa yekubatsira vatengi mukusimudzira nekugadzira.
Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza nyika yese kuburikidza neyedu hombe yekutengesa network uye inogutsa vatengi vedu neakakwana mushure mekutengesa sevhisi.Tiri kukudziridza nekuwedzera zvigadzirwa zvitsva hafu yega yegore. Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kutumirwa kuUSA, Canada, Mexico, South America, Russia neEuropean nyika.Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzimwe nyika uye zvinonakidzwa nemusika unovimbisa wemhando yepamusoro, yemakwikwi mutengo uye sevhisi yakanaka. vepakutanga vane zvitupa zveOEM, vimbisa iwo mhando uye mushe mushure mekutengesa sevhisi. Zvichava zvedu mufaro kutaura iwe mutengo wakanyanya kunaka uye nekukupa iwe sevhisi yakanakisa.
Tsika dzekambani yedu kutendeseka, kushingairira, pragmatism, kuonga uye kusava nehanya.Tiri kutarisira kupa vatengi kubva kumatunhu ese epasi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mutengo unokwikwidza kwazvo. Kuti tibudirire ichi chinangwa, isu tasimbisa yakasimba solid kudzora, kuongorora, kwakanyanya manejimendi uye yakanaka nzira yekugovera. kuverengera mhando yezvigadzirwa zvedu, mafekitori ese isu atinotungamira uye tinoshanda pamwe chete nezvibereko auto zvikamu zvakanyanya ku ISO9001 / QS9000, TS16949 yemhando certification.
Kambani yedu inogara ichitevedzera "mhando inovavarira, yakanaka yekutevera kutevedzera" bhizinesi rezvebhizimusi, shandisa mweya wekuvandudza kuti uwane kutarisisa pamwe nekubatana kubva kushamwari dzedu. Zvigadzirwa zvedu ndezvematanho azere, mutengo unodhura, mhando yepamusoro, uye simudza yakakwira. Tinotarisa pamutengo unonzwisisika uye pa - nguva yekuendesa.
Chamhembe Afrika 25.00%
Mid Kumabvazuva 20.00%
Nhasi vatengi vedu vanobva kunyika dzinopfuura makumi matatu vanovimba neSWB's Zvigadzirwa, mu Africa, Asia, South America, Europe, North America uye Middle East nezvimwe.
Isu tinotenda kuti vashandi havasi ivo chete vanonyanya kukosha zviwanikwa zvekambani, asiwo iro rakakosha kwazvo dombo rekona rekambani. Shanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. inokoshesa kukosha kukuru mukugadzira basa rinonakidza revashandi uye nekuvapa nzvimbo yakakura yekuvandudza munzvimbo ine simba, yesainzi, ineshungu uye yakavhurika nzvimbo yekushanda.Tinoona kuti vashandi vanowana ruzivo rwakakwana uye rusununguko ruzere. kushanda kuti kugona kwavo kugone kuzadzikiswa. Kutaurirana uye kudzidziswa ndizvo zvinhu zvekutanga zvehutungamiriri hwedu tsika. Mukuita izvi, isu tinotenda kuti vanhu vanogona uye vanozoita sarudzo dzakarurama uye voita basa rakanaka.Tinoedza kuzadzikisa zvido zvevashandi vedu kuburikidza nhaurirano yakarongeka nemhinduro pane kuita kweumwe neumwe tichisangana nezvinodiwa zvebhizimusi ramangwana. Isu tinopa mikana yekuvandudza kuvashandi vedu uye tinotarisira kuti vatore mutoro wekuvandudza kwavo pachedu. Kudzidziswa kwakaringana nekusimudzira kwakakosha mukubudirira kwenguva refu kwekambani nevashandi vayo.Tinoedza kupa akasiyana mikana inochinja yemabasa inoenderana nezvinodiwa nemunhu, uye tinotenda mukugadzira chiyero pakati pebasa nehupenyu hwega. Makambani anonzwisisa kuti mamiriro ekushanda anotarisirwa anosiyana nematanho ehupenyu hwavo uye nezvavanofunga.
Tinokurudzira vashandi vedu kuti vashande nesimba, vagadzire, uye vavhiringidze nzira yatinoshanda nayo, nekuti kuda kuziva uye kushinga kunogona kukurudzira vanhu kuti vawane nzira nyowani dzekushanda.
Shanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. inogara ichitsvaga kukura kwakajairika kwesangano nevashandi vayo, ichivapa nharaunda yakanaka yekushanda, mikana yakawanda yekusimudzira mabasa, kudzidziswa kwakapfuma uye mikana yekuchinjana yepasi rose.
Kubudikidza nekuongororwa kweposvo uye kumisikidzwa kwezviratidzo zvekuita kune mumwe nemumwe mushandi, Shanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. inopa vashandi mabasa akajeka uye zvinodikanwa zvakajeka, inokurudzira vashandi kukunda zvipingaidzo nehunyanzvi, kupedzisa mamishini avo, kuva netariro uye kushamisa. , shinga kuve nemutoro, uye uwane basa rekuvandudza kuburikidza nekuenderera mberi kudzidza uye kuita.
Shanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. inotsigira kubatana pakati pemadhipatimendi nevashandi zvichibva pachisungo chakabatana uye kuvimba kwakazara, inovaka zvakanakira kambani pamwe nezvakanakira timu, inokurudzira kugovana ruzivo pakati pevashandi, inosimbisa hukama hwakanaka hwekushanda, uye inoziva zvipo zvevamwe vanhu. kubasa.